Dib-u-sixidda afkaaraha diinta islaamka: laba daran mid dooro! – Kaasho Maanka
Mowduuca dib usixidda afkaaraha diinta islaamku waa mid kamid ah doodadaha dhowrkii dabshid ee ina dhaafay ka daaran bulshada soomaaliyeed dhexdeeda iyo guud ahaanba dunida islaamka oo dhan. Waa arrin aad loogu baahan yahay. Mase fududa oo waa arrin caaiiqdo iyo diin la xariirta.
Hadaba maxaa khaldan oo la saxayaa?. Waa su’aalaha ugu badan ee la isku qabto markii barnaamijkaan laga doodayo. Wax badan baa qaldan haddii caqliga aan loo xeerinayn xurmaynta afkaaro wadaadeed. Afkaaro duugoobay. Afkaaruhu waa kuwa ka turjumaya dhamaan afarta tiir ee diintu ku taagan tahay.
Hadaba markii caqliga la adeegsaday, maankana la furay waxaa soo baxday ceebaha afkaaro diin iyo kuwa dhaqanba oo daboolnaa. Waxay noqdeen afkaaro khaldan, is diidan oon la jaanqaadi karin wacyiga iyo wakhtigaanba.
Afkaaruhu siyaalo badanba waa ku ceeboobeen. Qaar cilmi ahaan ayaa loo haystay oo waa la dumiyay, kuwo ayagaa iska horyimid halka kuwa kalana ahaayeen dhaqan bulshada carbeed lahayd se la diimeeyay waayadii dhexe ee diinta islaamka gaartay dhulal badan oo maanta laga haysto iyada.
Hadaba caqabadda ugu wayn ee hortaagan dib usixidda afkaaraha diintu waa quraanka. Oo quraanka laftirkiisa ayaaba asal u ah maan-gad (logic fallacies). Sidee laga yeelayaa? Ma lama taabtaan baa quraanku? Isbadal ma ubaahan yahay asagu? Maxaase xal ah?
Markay arrintu halkaas marayso labo dookh un baa inoo furan wax saddexayn karaayi ma jiraan. Waana laba daran mid dooro: Reform project ama Re-enterpretation project.
Reform project ama barnaamijka dib-uhabaynta diinta. waa in isbadal oo dhan uu quraanku ugu horreeyaa oo sal iyo baarba looga baxaa, wixii isdiidooyin, maan-gad ama khalad ah oo dhanna laga saaraa. Maxaa yeelay quraanku waa isha koobaad ee diintuba ku taagan tahay waana halka ay sartu ka qurunsan tahay! In isaga mudnaanta kobaad lasiiyaayi waa waajib haddii larabo in wax la saxo. Arrinkaanina waa mid aad iyo aad u adag oo aysan fududayn hirgalintiisu!!!
QORMO LA XIRIIRTA: DABA-MACAWSAYN (Dabada oo macaws lagu gufeeyo)
Re-enterpretation project ama dib-ufasirida afkaaraha diinta oo dhan. Barnaamijkaani waa midka imminka ay adeegsadaan qolyaha raba in wax la saxo oo la hagaajiyo. Wuu ka fudud yahay kan hore laakiin maahan dookh xal waara keeni kara. Waayo fikraddii la diidanaa ayunbaa micna kale loo samaynayaa ee waxba ka badali maayo.
Hadaba bulsha waynta muslimiinta ah oo dhan waa ka siman yihiin baahida loo qabo dib usixida diinta islaamka. Dadka soomaaliyeedna badankiisu waa islaam. Waana dadka ugu ad-adag ku dhaqan keeda. Hadaba labadaas khiyaar (option) een soo xusnay wixii laga yeeli lahaa ayaa loo baahan yahay.
W/Q: Qoraa Dahsoon 17th December 2019